Maimaim-poana ny Mampiaraka toerana ho an'ny vehivavy amin'ny vahiny
Maimaim-poana ny Mampiaraka toerana ho an’ny vehivavy amin’ny vahiny
Mpanjifa ny toerana, avy any Alemaina, Aotrisy sy Soisa izay liana amin’ny fanombohana ny fianakaviana sy ny fifandraisana matotra amin’ny zazavavy avy any Eoropa Atsinanana Ny eoropeana. Ny vahiny Mampiaraka toerana dia tena maimaim-poana ho an’ny vehivavy. Ny toerana dia tsy manolotra na inona na inona asa fanampiny, raha tsy izany dia mitarika vola fanampiny. Ny ankizivavy dia afaka misoratra anarana ao amin’ny habaka amin’ny fipihana eo amin’ny»fisoratana anarana maimaim-poana»bokotra, mameno ny fanontaniana ary manomboka mitady ho mendrika ny kandidà. Mba ho mahomby sy ara-pihetseham-po foana ny fifandanjana, mila tsarovy ny fahamarinana tsotra: nahita olon-tiana iray dia asa fa mitaky fotoana sy faharetana. Ny habaka dia afaka manome ny tanora ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny toe-piainana noho ny Mampiaraka. Ho faly isika hizara ny zavatra niainany Ianao, na mamaly ny fanontaniana. Na izany aza, ny fahombiazana dia miankina tanteraka amin’ny ny ezaka ataon ny vehivavy sy ny lehilahy mba hahita ny mpiara-miasa tsara. Noho izany, dia tokony handray ny fifantenana ho zava-dehibe sy mameno ny teny fampiharana. Amin’ny antsipirihany famaritana ny tombontsoa, ny fampianarana ambaratonga sy ny teny vahiny ny fahaiza-manao dia hampitombo Ny vintana ho liana amin’ny olona. Lehilahy eo amin’ny toerana handoavana ny fahafahana mandefa hafatra. Ny tombony azo amin’ity fomba ity dia ny olona no tsy tena tototry ny be dia be ny ankizivavy mandritra izany fotoana izany, ary mahatonga ny safidy tsara, mifototra amin’ny tombontsoa amin’ny Mampiaraka ny ankizivavy sy ny taorian’ny famakiana ny fanazavana omena ao amin’ny fanontaniana. Izany dia manampy ny olona hahatakatra ny fomba lehibe sy voahevitra tsara ny fanirian izy ireo mba hihaona amin’ny zazavavy avy any Atsinanan’i Eoropa. Noho izany antony izany, dia angataho ny ankizivavy tsy mahatsiaro ho miala tsiny ho an’ny lehilahy raha toa izy ka tsy liana amin’ny fifandraisana bebe kokoa aminy, ary tsy hamela na inona na inona hafatra ho olona raha tsy misy ny valiny. Raha ny ankizivavy no tsy liana amin’ny fivoriana ny olona izay nanoratra momba azy, dia tokony mampahafantatra azy momba izany.
Mba hisarihana ny olona iray ny saina, dia afaka Maneho ny fiaraha-miory, na mandefa hafatra. Ny eoropeana ny vehivavy manana toe-tsaina tsara manoloana ny tovovavy izay afaka handray ny fandraisana an-tanana, ary manomboka miteny ho an’ny tenany. Izany dia manome ny ankizivavy ny fahatokisan-tena eo imasony. izany no tsy chat, ny mpampiasa dia tsy online fotoana be dia be ho»nahatsikaritra». Ny hafatra rehetra sy ny fanehoana ny fiaraha-miory amin’ny ny toerana dia naniraka ny mpampiasa amin’ny alalan’ny mailaka, ary izy ireo dia afaka miditra mora foana ny toerana. Ka indraindray dia mila ny fotoana fohy mba hahazoana ny valin’ny hafatra na fangorahana. Na izany aza, dia zava-dehibe mba hiverina ny hafatra na ny fiaraha-miory amin’ny olona amin’ny fotoana, ary mety ho izay ny olona dia tsy liana amin’ny fifandraisana nandritra ny andro maro taorian’ny fandefasana ny hafatra. Raha toa ka manana fanontaniana manokana, na ny ahiahy momba ny toerana, dia afaka hifandray ny iray amin’ny mpiasa. izany dia tsy misy sampan-draharaha prenuptial fifanarahana. Noho izany antony izany, ny toerana dia afaka misoratra anarana ny tovovavy izay liana amin’ny fitadiavana mpiara-miombon’antoka ho an’ny fifandraisana matotra sy mihevitra ny hanambady vahiny iray amin’ny vokatry ny mihetsika. Mampiasa ny asa fanompoana dia tena maimaim-poana ho an’ny ankizivavy. Mba hisoratra anarana, mifidy»fisoratana anarana maimaim-poana». Rehefa afaka izany, ny fifandraisana amin’ny endrika ho aseho mba hameno azy avy: dia mila mamaritra ny anarana*, toeram-ponenana, daty nahaterahana, mampakatra ny profil sary, ary hiditra ny amin’izao fotoana izao ny adiresy mailaka. Rehefa avy manindry ny»Register»bokotra, mailaka dia ho nalefa tany Amin’ny adiresy mailaka amin’ny fangatahana mba hampavitrika ny mombamomba azy. Izany mailaka dia mirakitra ireto fampahalalana manaraka ireto: ny anarana, ny teny miafina (azonao atao ny manova ny tenimiafina ao amin’ny mombamomba ny toe-javatra), sy ny rohy hampavitrika ny mombamomba azy. Tsy maintsy tsindrio eo amin’ny rohy io, raha tsy izany dia tsy ny mombamomba, dia tsy ho ampy ho an’ny lehilahy sy ho voafafa ao anatin’ny ora. Raha toa ka tsy mahita na inona na inona mailaka ao amin’ny Inbox, jereo ny Spam fampirimana. Raha toa ka manana olana nanamafy ny mombamomba azy, mba hifandray mpanjifa fanohanana na mandefa hafatra. * Ny lehilahy eo amin’ny toerana izay liana amin’ny fitadiavana mpiara-miombon’antoka ho an’ny fifandraisana matotra, izay no mahatonga ny azo antoka sy ny fahamarinany, izay hanome antsika tena vaovao manan-danja. Noho izany antony izany, soraty ny tena anaranao. Mombamomba amin’ny anaram-bosotra virtoaly sy ny anarana dia ho voasakana ho an’ny hitantana ny toerana. Izany fitsipika izany dia mihatra ihany koa amin’ny hafa namaly.
Misaotra anao noho ny fahazavan-tsaina
Mba hialàna amin’ny»tsy ilaina»nisoratra anarana (anisan’izany ny fisoratana anarana ny mpisera izay manana tanjona ny Fiarahana dia mbola mampisalasala na ny dikany), ny fitantanana toerana mamoaka afa-tsy voamarina fanontaniana. Izany fitsipika izany dia mihatra ny mpampiasa rehetra tsy an-kanavaka. Dia miraharaha ny momba ny fiarovana sy te-hiaro anao amin’ny fahadisoam-panantenana. Raha vao ny adiresy mailaka dia voamarina, ny fanontaniana dia navoaka tao amin’ny tranonkala ao ny andro manaraka, araka ny toerana mpitantana taratasim-bola izany. Amin’ny faran’ny ny banjino, ny mailaka dia ho nalefa tany amin’ny adiresy mailaka nampahafantatra anao fa ny fanontaniana dia efa navoaka tao amin’ny tranonkala. Raha toa ka ny toerana mpiasa manana fanontaniana, isika hifandray aminao amin’ny alalan’ny mailaka. Amin’izao fotoana izao, afaka mijery olona ny mombamomba azy, manova ny mombamomba azy, fa ny toerana ny asa dia ho voafetra ihany ho anao. Midika izany fa ianao dia tsy ho afaka hanoratra ny momba ny olona iray na vondrona mba hanehoana famindram-po. Raha miandry isika, dia fahazoan-dalana fa anao familiarize ny tenanao amin’ny habaka ny lalàna, ny endri-javatra, sy ny asa, izay voalaza amin’ny antsipirihany ao amin’ny tena sakafo ao amin’ny»Fomba fiasan’izy»fizarana. Mampiaraka ny olona avy any Alemaina Mampiaraka ny vahiny Mampifandray ho an’ny vehivavy Mampiaraka Toerana iraisam-pirenena Mampiaraka toerana an-tserasera-card
← Karama Mampiaraka toerana ho an'ny olona
Ny lahatsary amin'ny chat United Amerikana amin'ny mponina ao Brezila, hianatra teny anglisy →